Amathiphu wezengqondo: ukuthi yini okufanele uyenze uma umyeni wakho ekopela kuwe
Leli gama elibi liwukuzingela. Kwabaningi besifazane, kufana nomusho: ukukhawulwa komuntu othandekayo, ukwethemba okuphukile, ukuwa komndeni ... Ukusabela kokuqala kuvame ukushaqeka nokubhujiswa. Khona-ke kufika intukuthelo, intukuthelo futhi ... ukudideka. Ungaphila kanjani futhi wenzani uma ufunda ukuthi umyeni wakho ushintshile wena komunye? Izazi zengqondo kuleli cala zincoma ukuthi zingabonakali ukucaciswa okusheshayo kobudlelwane futhi zigweme ukuhlambalaza, njengoba zifaka isandla ekungeneni kwesimo esivele siphelile. Ungalokothi ukhohlwe umbono wesifazane ocebile: mhlawumbe akukho okhethekile okwenzekile. Umyeni ubuyele ekuhambeni kwebhizinisi futhi wazi ukuthi kukhona okungalungile kuye? Kodwa izinguquko zenzeka kithi nsuku zonke. Kungokuthi nje siphila eceleni, izinguquko zihamba kancane futhi zingabonakali ngathi. Kule ndaba, kubalulekile ukubuza ngokuphindaphindiwe: "Ingabe kunesizathu sangempela sokubhekana na?" Ngaphandle kwalokho, uma kukhona okuthile, cabanga: emva kwakho konke, asizona izingelosi. Kungaba khona isimo esishukumisayo, esithonywa ukuxabana okwakamuva emndenini. Umuntu othile wayefuna ukufakazela ukuthi unamandla okwenza isenzo esibi noma unqume ukushintsha isithunzi, ngokubhikisha.
Umyeni wami washintsha-ukuthi benzeni: izeluleko zesazi sengqondo
Ake sithi manje okokuqala kunesifiso esisodwa kuphela: ukuletha umyeni ukuhlanza amanzi. Kodwa ingabe kukhona abesifazane abaningi abavuma ukuthi bayakwazi ukumelana, ngaphandle kokuphazamiseka kwemizwa, indaba eqotho neyiqiniso yomuntu othandekayo mayelana 'nezinhlelo zakhe zokuzijabulisa'? Ingabe kuyoba lula ngawe kokubili?
Ngaphambi kokuya enkulumweni evulekile, eqondile, cabanga ngokucophelela ukuthi yiziphi amaphutha ongazenza ngenkathi ukhuluma nomyeni wakhe. Ukuphinga kungakufakazela ukuthi umndeni wakho uhlangabezana nesikhathi esiyinkimbinkimbi kakhulu sokuthuthukiswa kwawo.
Cabanga ngokuthi uzokwenzenjani uma uzwa ukusola okuvela kumyeni wakho ngawe, kusho ukuthi kungenzeka ukuthi uqoqe kuye iminyaka. Esinye sezimbangela zokukhaphela kungukuphila empilweni ehluphekile ngokomzwelo. Mhlawumbe umyeni wakho akanakho ukuqonda okwanele. Ulungele ukubhekana nalokhu iqiniso?
Akufanele neze ukukhuluma nomyeni wakho ngomunye wesifazane, ngisho noma unesiqiniseko sokuthi ukhona. Khuluma ngawe, ngaye, mayelana nomndeni wakho, mayelana nezinhlelo zesikhathi esizayo zokuphila okuhlangene.
Yilungele iqiniso lokuthi uma umyeni evuma ukuvukela umbuso, ukukhululeka okufisayo kungase kungabikho. Kulesi simo ukuphendula kwakho kungabaningi. Abesifazane abaningi bafika isinqumo "sokuzibulala" sokuphika abayeni babo ukusondelana, baqhubeke behlala naye efulethini elifanayo. Awukwazi ukunqamula ukuziqhenya kwawo futhi aphendule impilo ibe yisihogo, hhayi kuphela kubo, kodwa kubo bonke abaxhumana nabo.
Ungamlahla umyeni wakho yonke impilo yakho, kodwa ucabanga, ungabe ujabule noma ungathokozi ngalokhu ngalokhu? Kuyoba impindiselo kuwe, futhi "ukuziqhenya" okunjalo akukuphakamisi, kodwa kunalokho kunamahloni. "Inzondo yinkambo enzima kunazo zonke futhi enyanyekayo kakhulu umuntu oyedwa angazizwa ngayo, ngoba izindandatho zalolu chungechunge zithathwa intukuthelo nokwesaba," kubhala umcwaningi waseNtaliyane uNicolo Hugo Foscolo.
Uma unomuzwa wokuthi ugxile kakhulu ekuthukutheleni kusukela ekukhawuleni komyeni wakho ukuthi kunzima ukuthi ucabange ngenye into, kufanele ukuthi uphenduke kubacwaningqondo bezengqondo.
Kodwa kunoma yikuphi, unesinqumo sokuthi owesifazane angenza. Zama ukuthethelela umyeni wakho futhi ungaphinda umkhumbuze okwenzekile noma ngaphandle kwesizathu. Kodwa nje ungadlali kahle, yiba nesifiso esiqotho esifisweni sakho sokuthethelela. Ekugcineni, yini nje engenzeki empilweni, yiziphi izinhlobo zamaphutha esingawenzi. Isintu kulo lonke umlando walo silwela ukuxazulula le nkinga: lapho inkululeko yomuntu oyedwa iphela khona futhi ingapheli enye iqala. Ngokuqinisekile empilweni yakho ungathola "izono" eziningi ezahlukene. Cabanga ngalokho izimfanelo zakho ezivimbela ukudala umkhathi othembekile, ovulekile emndenini. Mhlawumbe-ke kuyoba lula kuwe ukubheka isimo kusuka kolunye uhlangothi.
Iningi lalezi zincomo libhekisela esimweni sokungahambisani nesikhathi esifushane. Isimo sihlukile esimweni lapho ukuhlukunyezwa kuthatha isikhathi eside futhi kuphenduka impilo emibili. Uma lokhu kwenzeka, khona-ke nguwe kuphela nomyeni wakho onganquma ukuthi ungathuthukisa kanjani umndeni wakho. Into eyinhloko ukukhumbula ukuthi impilo ingahlinzeka ngezindlela eziningi eziningi ezivela ezimweni, ekuboneni kokuqala, ezingenathemba. Uma unomuzwa wokuthi awukakwazi ukuthethelela futhi ubheke indlela efanele yokuthuthukisa ubuhlobo, ungazama izindlela ezintsha zokuxhumana nomyeni wakho. Mhlawumbe, akanakho ukufudumala komzwelo noma udinga ukukhulumisana okukhululekile.
Kunoma yikuphi, ngisho noma kufike ekuphukeni, kubalulekile ukuqonda ukuthi ngaso sonke isikhathi unethuba lokuzibeka empilweni, ngisho nangaphandle kosizo nokusekelwa komyeni ongathembeki.
Uma ingaphansi kwengcindezi umuntu uyavuma ukuba nomunye - okufanele akwenze
Uma indoda ihlale ikhohlisa kumkayo
Kungani amadoda engathetheleli ukuphinga kwabesifazane
Kuthiwani uma umyeni wami eshintshile?
Indlela yokuziphatha emva kokukhashelwa komyeni wakhe
Amanveli eholide, kungani enza khona ekuphileni kwethu
Ukuhlukumezeka kwabantu: indlela yokuphila nalokhu?
Fighter kusuka ephepheni
Indlela yokuzivikela ekuhlukaneni emndenini
Ukulungiselela ukusebenza kwezingane ekuseni
Amaski ezinwele ezivela emnsalo
Ama-ladies amahle kakhulu abukela
Ukuphulukisa izindawo ze-immortelle
Izindlela eziyishumi ezilula zokubukeka kahle
Isingeniso sokudla okuhambisanayo nokudla okufakelwayo
Ukuthokozela imincintiswano kaKhisimusi yebhizinisi
Logic, bafe: ukwehluleka imfashini Olga Buzovoy, isithombe
Imiphumela yomncintiswano "Hlangana nehlobo lokuhlelwa kabusha"
I-Fitbol yokulahlekelwa kwesisindo
Indlela yokukhetha i-lipstick
Indlela yokuvimbela i-couperose